Xiaomi Mi 8: amanqaku, iinguqulelo kunye nazo zonke iinkcukacha | Iindaba zeGajethi
I-Xiaomi Mi 8 kukubheja okuhle kwenkampani yaseTshayina eguquguqukayo kwicandelo leefowuni eziphathwayo nezihlakaniphile. Nangona kunjalo, olu sapho lutsha luya kubandakanya iinguqulelo ezintathu ezahlukeneyo: Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 SE kunye neXiaomi Mi 8 Edition Explorer. Le yokugqibela yeyona modeli inamandla yenkampani ukuza kuthi ga ngoku. Kodwa ayisiyiyo kuphela amandla ayo, ikwenza njalo nangoyilo olucace gca.
IXiaomi yenye yeenkampani ezithengisa ezona zixhobo zininzi kwihlabathi liphela. Ngomnye wabambalwa ababonelela ngomgangatho olungileyo kakhulu / umyinge wexabiso. Kwaye kukhululo ngalunye lubonisa. IXiaomi Mi 8 akukho ngaphandle kwaye inoyilo olunomtsalane kunye neempawu zobuchwephesha ezinamandla kakhulu, ukukwazi ukuthetha nawe kuwe ukuya kubhejo ezinkulu zeenkampani ezibalulekileyo njengeSamsung, iApple okanye i-LG. Nangona le yokugqibela ingenalo ixesha elimnandi kwintengiso smartphones. Kodwa ukushiya lo mbandela ecaleni, sihamba nazo zonke iinkcukacha zokubheja kukaXiaomi kulo nyaka we-2018.
1 Iimakhishithi zedatha yobuchwephesha
2 Xiaomi Mi 8: eyokuqala
3 IXiaomi Mi 8 SE: imodeli efuna ukufikelela kuzo zonke iipokotho
4 I-Xiaomi Mi 8 Edition Edition: umphezulu woluhlu olunoyilo olunomtsalane
5 Amaxabiso kunye nokufumaneka kwezi nguqulelo zintathu
Iimakhishithi zedatha yobuchwephesha
Isikrini 6.22 intshi HD epheleleyo 5.88 intshi HD epheleleyo I-6.22 intshi HD epheleleyo + kunye nomfundi odityanisiweyo weminwe
Inkqubo Snapdragon 845 Snapdragon 720 Snapdragon 845
Chip yemizobo Adreno 630 Adreno 616 Adreno 630
Imemori ye-RAM 6 GB 4 / 6 GB 8 GB
Ukugcina ngaphakathi 64 / 128 / 256 GB 64 GB 128 GB
Ifoto ephambili yekhamera I-12 + 12 MPx I-12 + 5 MPx I-12 + 12 MPx
Ikhamera yangaphambili I-20 MPx I-20 MPx I-20 MPx
Inkqubo yokusebenza I-Android 8.1 Oreo + MIUI 10 I-Android 8.1 Oreo + MIUI 10 I-Android 8.1 Oreo + MIUI 10
Ibhetri I-3.300 mAh + yokutshaja ngokukhawuleza + ukutshaja ngaphandle kwamacingo I-3.120 mAh + intlawulo ekhawulezayo I-3.300 mAh + yokutshaja ngokukhawuleza + ukutshaja ngaphandle kwamacingo
Unxibelelwano 4G / DualSIM / GPS ezimbini / NFC / Bluetooth 5.0 / USB-C 4G / DualSIM / GPS / NFC / iBluetooth 5.0 / USB-C 4G / DualSIM / GPS ezimbini / NFC / Bluetooth 5.0 / USB-C
Xiaomi Mi 8: eyokuqala
Imodeli enika igama kusapho lonke. Le modeli yoqobo, mhlawumbi, lolona hlobo lulungelelanisiweyo lwazo zonke. Okokuqala siza kuba ne Isikrini se-6,21 intshi ye-AMOLED diagonally, kwifomathi ye-18: 7: 9 kunye neglasi egobile engu-2.5D. Ngokunjalo, izakhelo zincitshisiwe zaze zafikelela kubuninzi kunye nomgangatho wokuchukumisa we-86,68% yetotali iyaphunyezwa. Okwangoku, isisombululo esikhethiweyo yi-HD epheleleyo +; Oko kukuthi: ngamanani kuya kuba ziiphikseli eziyi-1.080 x 2.248.
Kwangokunjalo, khange bakwazi ukumelana nokulandela imfashini kwaye ngaphambili-kwinxalenye ephezulu yesikrini-siya kuba nendoda endala eyaziwayo: eyaziwayo "Notch". Kugcinwe izinzwa ezahlukeneyo (i-12 + 12 megapixels) kunye nekhamera yesisombululo se-megapixel engama-20 enobuso obaziwayo ukuze bakwazi ukuvula i-terminal ngokukhuselekileyo- kwaye ngokukhawuleza-. Cinga indlela ababhaptiza ngayo? Ewe: Isazisi sobuso. Kwaye ngokuqinisekileyo kuyaqinisekiswa oko baya kuba neAnimojis yabo.
Ngeli xesha, ngaphakathi babengenakukwazi ukwenza amandla. Kwaye ukuphakama kwalo nyaka i-2018, iXiaomi Mi 8 iya kuba noluhlu oluphezulu lweQualcomm: Isiseko se-845 seSnadragon 8 Inkqubo yokusebenza kwi-2,8 GHz frequency. Kule nto kufuneka kongezwe i-chip ye-Adreno 630 yemizobo eya kwenza ukuba i-terminal iziphathe njengomtsalane xa sifuna imifanekiso engaphezulu.
Kwelinye icala, le CPU iya kukhatshwa I-6 GB yememori ye-RAM kunye nokukhetha ukukhetha indawo yangaphakathi ye-64, 128 okanye i-256 GB. Ngoku, ukuba kukho into esebenzayo, kungcono ukuyifaka kumaqela akho. Inkqubo ye- IXiaomi Mi 8 iya kuba nenzwa kabini ngasemva yokudlala ngokufiphala kweefoto. Kwangokunjalo, iXiaomi ikwabheja kubukrelekrele bokufakelwa kwezi zixhobo kwaye ngeendlela ezahlukeneyo iya kuzama ukukunika eyona snapshot inokwenzeka. Nazi iisampulu ezishiywe yinkampani ngokwayo phambi kwezinye iikhamera zeli candelo. Ingakumbi, ngokwe amanqaku afunyenwe kwi-DxOMark ngamanqaku ayi-105 "Amanqaku e-IPhone X ali-101."
Kwakhona, ibhetri ehamba nale nguqulo Umthamo weemitha ezingama-3.300. Kwaye, lumka, kuba iyahambelana kunye nokutshaja ngokukhawuleza kunye nokutshaja ngaphandle kwamacingo. Ngokuphathelele kuhlobo lwe-Android, uya kwazi kakuhle ukuba uXiaomi usebenzisa owakhe umaleko wesiko obizwa ngokuba yi-MIUI. Lo nyaka uza Inguqulelo ye-MIUI 10 esekwe kwi-Android 8.1 Oreo -Kule vidiyo iqhotyoshelweyo ungabona isampulu yento ekulindele kweli qela. Kwaye ubukrelekrele bokufakelwa buya kuqhubeka ukuba yenye yeenkwenkwezi zeqela kunye nonyaka. Ngokukodwa kwinto ebhekisa kuye mncedisi Xiaomi AI.
IXiaomi Mi 8 SE: imodeli efuna ukufikelela kuzo zonke iipokotho
Kwinqanaba eliphakathi siya kuba nemodeli Xiaomi Mi 8 SE. Eli qela liza kuba nokucaciswa okuthe kratya kunomntakwabo omdala, nangona kuyinyani- njengoko siza kubona kamva-ixabiso liya kuba lifikeleleke ngakumbi kulo lonke uhlahlo-lwabiwo mali. Oko kukuthi, isicwangciso esingeyonto intsha kwaye esiza kukhumbula into enye eyenziwa yiApple nge-iPhone yayo kunye nohlobo lwayo lwe-SE.
Le Xiaomi Mi 8 SE incinci ngobukhulu: Isikrini esine-5,88-intshi ye-diagon ye-AMOLED kwaye uyonwabele isisombululo esipheleleyo se-HD + (Iipikseli eziyi-1.080 x 2.248). Okwangoku, eyona nto inomdla ngeli qela ayiselona xabiso lalo, kodwa, kodwa iya kuba kukubeka ukubeka kwintengiso iprosesa entsha yeQualcomm egxile kuluhlu oluphakamileyo lwecandelo. Imalunga ne-chip Snapdragon 710 nge-Adreno 616, ethi nangona kungalindelwanga ukuba ifezekise amanani omntakwabo omdala, kulindeleke ukuba inyibilike ngakumbi kunemodeli ethatha indawo yayo, i-Snapdragon 660.
Kwelinye icala, le Xiaomi Mi 8 SE inokufumaneka kwi Iinguqulelo ezimbini ze-RAM: 4 okanye 6 GB. Ngelixa enye indawo yokugcina ingena kwimodyuli engama-64 GB. Siza kuba nekhamera ezimbini zenzwa ngasemva (12 + 5 megapixels) kwaye iyakubonisa ubukrelekrele bokuzenzela. Ngoku kule meko asinabungqina. Inxalenye engaphambili iya kuqhutywa yi "Notch" yayo kunye nesixhobo sayo sokwenza i-20 megapixel sensor.
Okokugqibela, iXiaomi Mi 8 SE ikwasekwe kuyo I-Android 8.1 Oreo kunye neMIUI 10, ngelixa ibhetri yayo ifikelela kwi-3.120 milliamps kwaye iyahambelana nokutshaja ngokukhawuleza. Kule meko, ukutshaja ngaphandle kwamacingo kushiywe ngaphandle. Okokugqibela, siya kuba netekhnoloji ye-Bluetooth 5.0, i-NFC kunye nohlobo lwe-USB port C.
I-Xiaomi Mi 8 Edition Edition: umphezulu woluhlu olunoyilo olunomtsalane
Kwaye siza kwi-icing kwikhekhe: i Xiaomi Mi 8 uHlelo lokuHlola. Inkampani ifuna ukubhiyozela isikhumbuzo sayo sesibhozo ngale nguqulo inika umdla enika iphaneli yangasemva ebonakalayo ecace gca etyhila zonke izinto zayo zangaphakathi, inkcukacha abanokuyonwabela abathandi bobuchwephesha njengabantwana.
Iimpawu zobuchwephesha ziyafana onokuzifumana kwinguqulelo yoqobo esiyichazile ekuqaleni. Ngoku, kuya kubakho utshintsho oluthile njengokubonelela nge- I-8 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina indawo. Olu hlelo lweXiaomi Mi 8 Explorer luya kuthengiswa kuphela kulungelelwaniso.
Kodwa apha ayikho yonke into emangazayo efihliweyo kule modeli. Kwaye ngaba ukuba ezi modeli zimbini zangaphambili zinokufunda ngomnwe ngasemva, iXiaomi Mi 8 Explorer iyakuyifaka kwiscreen. Oko kukuthi: umva ushiywe ucocekile kwaye umphezulu wesikrini ngokwawo uya kusebenza njengesikena seminwe.
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, le modeli iya kuba nayo Ukuqwalaselwa kobuso be3DOko kukuthi, inyathelo elingaphaya kwemodeli yesiqhelo eya kubonelela ngeenkcukacha ezithe kratya xa kufikwa ekuqondeni ubuso.
Amaxabiso kunye nokufumaneka kwezi nguqulelo zintathu
Siza kumanqaku abaluleke kakhulu: liyakuba yintoni ixabiso lazo zonke iinguqulelo kunye nolungelelwaniso olufanelekileyo, kunye nokuba singazifumana nini izandla.
Uqobo lweXiaomi Mi 8:
I-6 GB ye-RAM + i-64 GB yokugcina: i-2.699 yuan (i-360 euros)
I-6 GB ye-RAM + i-128 GB yokugcina: i-2.999 yuan (i-400 euros)
I-6 GB ye-RAM + i-256 GB yokugcina: i-3.299 yuan (i-440 euros)
I-Xiaomi Mi 8SE:
I-4 GB ye-RAM + i-64 GB yokugcina: i-1.799 yuan (i-240 euros)
I-6 GB ye-RAM + i-64 GB yokugcina: i-1.999 yuan (i-270 euros)
Ushicilelo lweXiaomi Mi 8 Explorer:
I-8 GB ye-RAM + i-128 GB yokugcina: i-3.699 yuan (i-500 euros)
Ngelixa ukubakho kwezi modeli kuya kubakho e-China kuqala kwaye baya kuba njalo iyathengiswa ukusukela nge-5 kaJuni ezayo (Imodeli yoqobo yeXiaomi Mi 8) kwaye ngoJuni 7 iXiaomi Mi 8 SE. Uhlobo loHlolisiso luza kuthengiswa kamva, nangona ungekho umhla othile onikiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Xiaomi Mi 8: amanqaku, iinguqulelo kunye nazo zonke iinkcukacha
Indlwane yazisa ngokufika kukaMolo eSpain, kwinyanga ezayo
Ezi headphone ziya kuba luyolo ezindlebeni zethu